Kheladi - राष्ट्रिय टोली विवादः खेलाडी फिर्ता, प्रशिक्षक बाईबाई !
राष्ट्रिय टोली विवादः खेलाडी फिर्ता, प्रशिक्षक बाईबाई !
असार १०, २०७९ ०६:००
काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को नवनिर्वाचित कार्यसमितिले ‘निष्कासित राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीलाई ससम्मान टिममा फर्काउने’ निर्णय गरेसँगै वैशाख दोस्रो साता सुरु खेलाडी–प्रशिक्षक विवादले करिब निकास पाउने भएको छ ।
सोमबार सम्पन्न एन्फाको साधारणसभाले पंकजविक्रम नेम्वाङको अध्यक्षतामा चार वर्षे कार्यकालका लागि नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेको थियो । नयाँ कार्यसमितिको बुधबार बसेको पहिलो बैठकले छानबिन समितिको प्रतिदेवनका आधारमा खेलाडी फर्काउने र प्रशिक्षकको पनि विकल्प खोज्ने निर्णय गरेको थियो ।
एन्फाको यो निर्णयले तीन महिना बिदामा रहेका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीको नेपाली फुटबलसँगको सहकार्यमा पूर्णविराम लगाउने संकेत दिएको छ ।
कुवेती नागरिक अल्मुताइरीले २०७७ साल चैत २२ देखि मुख्य प्रशिक्षकका रूपमा नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमको नेतृत्व सम्हालेका थिए । त्यसपछि उनी लगातार चर्चामा छन् । सामाजिक सन्जालको भीड आफूतिर आकर्षित गर्न चतुर प्रशिक्षक अल्मुताइरी एन्फा निर्वाचनकै दिन पनि चर्चा कमाउनबाट पछि हटेनन् । अध्यक्षमा नेम्वाङ निर्वाचित हुनेबित्तिकै सामाजिक सन्जालमा नेपाल नफर्किने संकेत गर्दै लेखेको पोस्ट केहीबेरमै हटाएका थिए ।
उनको कार्यकालमा नेपालले हासिल गरेका केही ऐतिहासिक सफलता र समय–समयमा बाहिरिने उनका विवादास्पद अभिव्यक्तिले पछिल्लो डेढ वर्ष उनलाई निरन्तर चर्चामा राखिरह्यो । उनकै नेतृत्वमा गत वर्ष माल्दिभ्समा सम्पन्न दक्षिण एसियाको प्रतिष्ठित फुटबल साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल पुग्नु नेपालका लागि विशेष उपलब्धि रह्यो । तर, उनीसँग जोडिएको पछिल्लो विवादले भने नेपाली फुटबलमा भुइँचालो ल्यायो । जब उनले राष्ट्रिय टिमका प्रमुख १० खेलाडीलाई क्याम्पबाटै हटाइदिए ।
एसियन कप छनोटको तेस्रो चरणको तयारीका लागि बन्द प्रशिक्षण सुरु भइसकेको थियो । केही खेलाडी एन्फाको होस्टेलमा थिए भने केही आफ्नै घरमा । तर, एन्फाको होस्टेलमा आधारभूत आवश्यकतासमेत नभएकाले खेलाडीले होटलमा राख्न माग गरेका थिए । त्यही माग राख्न खेलाडीको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रशिक्षक अल्मुताइरीसँग पुगेका रोहित चन्दलाई उनले तुरुन्तै टिमबाट हटाएका थिए ।
त्यसपछि आधारभूत आवश्यकताको विषयमै कुरा राखेका कारण थप ९ सिनियर खेलाडीलाई पटक–पटक प्रशिक्षण सिविर छाड्न भनेपछि उनीहरू पनि टिमबाट बाहिरिऐका थिए । त्यसमा सुजल श्रेष्ठ, विमल घर्तीमगर, सुमन लामा, अञ्जन विष्ट, दिनेश राजवंशी, अनन्त तामाङ, विशाल राई, विशाल श्रेष्ठ र तेज तामाङ थिए । त्यतिबेलासम्म राष्ट्रिय टिमबाट हटाएका खेलाडी संख्या १० पुगिसकेको थियो ।
व्यावसायिक फुटबलका लागि माल्दिभ्समा रहेका तत्कालीन कप्तान किरण चेम्जोङले पनि सामाजिक सन्जालमार्फत आफ्ना सहकर्मी साथीहरूकै साथ दिए । त्यसको केही दिन नबित्दै अल्मुताइरीले थप १४ खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइसकेका थिए । वैशाख १४ मा खेलाडीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूहरूलाई बाध्य पारेर बन्द प्रशिक्षणबाट निकालिएको बताएका थिए ।
अन्ततः कुवेतमा हुने एसियन कप छनोटको तयारी गर्न नेपाली टिम कतार जाने भयो । त्यो टिममा चार नयाँ अनुहार समेट्दा तत्कालीन कप्तान किरणलाई समावेश नगरेर अल्मुताइरीले अर्को ‘सरप्राइज’ दिएका थिए । नेपाली राष्ट्रिय टोलीका लागि सर्वाधिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्ने कीर्तिमानी गोलकिपर किरणलाई निकाल्नुको कारण अन्य खेलाडीलाई साथ दिएर फेसबुकमा लेख्नुमात्र थियो ।
युवा टिम लिएर अल्मुताइरी कतार भ्रमणमा जानुअघि नै एन्फाले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन आइसकेको थियो । जसमा यो छनोटपछि खेलाडीलाई निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर टिममा फर्काउन तथा प्रशिक्षकको विकल्प खोज्न सुझाव दिइएको थियो । त्यसबाट पनि उनको नेतृत्वमा नेपालको त्यो नै अन्तिम भ्रमण हुने पक्का थियो ।
त्यसपछि विकसित घटनाक्रमले पनि नेपाली फुटबलमा अल्मुताइरीकाल अन्त्य भएको संकेत गर्छ । एउटा सञ्चारमाध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा अन्य एन्फा अध्यक्षसँग काम गर्न नसक्ने बताएका उनले चुनावकै दिन नेपाल नफर्किने संकेत दिइसकेका छन् ।
इन्स्टाग्रामको स्टोरीमा उनले ‘माया र साथका लागि धन्यवाद’ दिँदै ‘सम्पूर्ण कथाको अन्त्य हुने’ लेखेका थिए । अन्य अध्यक्षसँग काम नगर्ने घोषणा गरिसकेका अल्मुताइरीको त्यो स्टोरी अध्यक्ष पदको नतिजा आएको केही मिनेटमै पोस्ट हुनाले अर्थ पक्कै राख्छ ।
हुन त उनले यसअघि पनि पटक पटक नेपाल छाड्ने कुरा नगरेका होइनन् । एकाएक सामाजिक सन्जालमा गत वर्ष उनले आफू राजीनामा दिन एन्फा जान लागेको र त्यसको कारण तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ रहेको बताउँदै स्टाटस लेखेका थिए । तर, उनले राजीनामा भने दिएनन् ।
गत वर्ष नै माल्दिभ्समा जारी साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा नेपाललाई पुर्याएपछि आफू नेपाल नफर्किने बताएका थिए । पछि, सम्झौतामा सुविधा थप गरेपछि उनी नेपाल फर्किन तयार भए ।
तर, नयाँ एन्फा कार्यसमितिको बुधबारको बैठकले छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार प्रशिक्षकको हकमा पनि अगाडि बढ्ने बताएसँगै खेलाडी–प्रशिक्षक विवाद टुंगोतर्फ लम्किएको छ ।
प्रतिवेदनमा भविष्यमा यस्तै समस्या आइरहने भएकाले एसियन कप छनोटपछि कतार एफएसँग सल्लाह गरेर प्रशिक्षकको विकल्प खोज्न सुझाव दिइएको थियो ।
एन्फा बैठकले गरेको निर्णयको चौथो बुँदामा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडी र प्रशिक्षकबीचको विवादपछि गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनअनुरुप १० खेलाडीको हकमा राष्ट्रि«य टिममा सहभागी गराउने निर्णय गरियो । र, प्रशिक्षकको हकमा निज प्रशिक्षक र कतार फुटबल संघसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो ।’
कार्यसमितिको यो निर्णयसँगै तीन महिनादेखि रूमल्लिइरहेको फुटबल खेलाडी–प्रशिक्षक विवाद टुंगो नजिक पुगेको मान्न सकिन्छ ।
प्रिन्स र गौरिका सर्वोत्कृष्ट खेलाडी